Mandrisika Ireo Vavahadin-tserasera Lehibe Hifehy ny Vavany Ve i Korea Atsimo? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Novambra 2013 22:08 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 繁體中文, 简体中文, 한국어, English
Nanambara ny fikasany hanome alalana ireo vavahadin-tserasera lehibe hanao sivana sy hamafa ireo fanehoan-kevitry ny mpiserasera izay azo tsaraina ho manala baraka ny governemanta Koreana tatsimo, fihetsika ahiahian'ireo mpiserasera Koreana mety hametra ny fahalalaham-pitenana an-tserasera izany.
Nanatontosa valandresaka ny Vaomieran'ny Serasera Ao Korea Atsimo tamin'ity herinandro ity mba hampahafantarany ny fitsipika vaovao [ko] manome fahefana ireo vavahadin-tserasera lehibe hamafa ny fanehoan-kevitr'ireo mpiserasera ao anatin'ny 30 andro, indrindra ireo fanehoan-kevitra azo heverina ho manala baraka. Raha tsy misy fepetra raisina ao anatin'izany fe-potoana izany, tahaka ny fitarainana apetraky ny mpiserasera lasibatra, afaka mamafa ilay fanehoan-kevitra ny habaka (tranonkala).
Nanambara ny manampahefana fa hanamaivana ny enta-mavesatr'ireo vavahadin-tserasera ny fitsipika amin'ny alalan'ny fampihenana ireo tranga fanalam-baraka maromaro avy amin'ny fanehoan-kevitr'ireo mpiserasera. Na dia izany aza, manontany ireo mpitsikera raha azo amarinana ny fanomezan-dalana ny vavahadin-tserasera hanapa-kevitra na manala-baraka na tsia ny fanehoan-kevitra – fitsarana sarotra na dia ho an'ny mpahay lalàna matihanina aza.
Sary avy amin'ny vavahadin-tserasera lehibe indrindra ao Korea izay nisianà adihevitra mafana. Sary notrohan'ilay mpisera Flickr, @paperon. (CC BY NC 2.0)
Nanipika [ko] ny fampahalalam-baovao ao an-toerana fa manome antoka ireo vavahadin-tserasera ny manampahefana fa hisy ny fifanekena hanao izay hampihenana araka izay azo atao ny andraikitra ara-pitsarana raha misy ny fitoriana azy ireo- ka ho afaka madiodio mora foana ireo vavahadin-tserasera raha mampiseho fa efa nanivana na namafa fanehoan-kevitra. Na dia izany aza, nilaza ny mpanohitra fa hampiroborobo ny fifehezambava izany fitsipika izany ary afaka hanararaotra ity volavolan-dalàna ity ireo mpitondra mba hanerena ireo habaka hampangina ny mpanohitra.
Mafàna ny adihevitr'ireo mpiserasera teny anivon'ny habaka mavitrika malaza tahaka ny TodayHumor [ko] sy ny Ppompuu [ko] mikasika ity volavolan-dalàna ity sy ny fikasan'ny mpitondra Koreana Tatsimo tato ho ato hanolotra volavolan-dalàna maromaro hifehezana ny zavatra azo atao ao amin'ny aterineto, tahaka ny volavolan-dalàna hametrahana lalàna momba ny lalao antserasera ho tahaka ny rongony sy ny alikaola, sy ny sisa hafa mety hamehy ny ora fampiasàna finday raitra smartphone [ko]. Mpiserasera ID: 껄껄 nanazava [ko] tao amin'ny habaky ny TodayHumor:
TALOHA: Mangataka amin'ireo vavahadin-tserasera ny mpanao politika mba hamafa
TATY AORIANA: Tsy mila mangataka ny mpanao politika. Fa hanolo-tena ny vavahadin-tserasera ary hamafa.
Midika ity fitsipika ity fa ampiasaina toy ny ampinga ny vavahadin-tserasera ka azon'izy ireo hiafenana. Te-hiseho koa izy fa, nomeko fahefana [hamafa] ianao, ka ho solon'izany, hanaiky ahy an-tsitrapo ianao. Ity ny resaka voalohany tamin'ny adihevitra: raharaha sarotra ny fanalam-baraka [raha faritana]. Mahavita manao fitsarana tsy mitanila ve ireo vavahadin-tserasera? Adihevitra faharoa: Hoy izy ireo «raha voahazona ny mangaraharaha sy ny tsy fitanilàna, tsy ho olana izany». Amin'ny teny hafa, azo raisina koa hoe «Raha very ny mangarahara sy ny tsy fitanilàna, hisy ny olana goavana». Mahavita manao fitsarana marina mikasika ny olana ara-pitsarana tahaka ny fanalàm-baraka ve ny orinasa tsotra [tahaka ireo vavahadin-tserasera], ary ao anatin'ny fahefan'izy ireo ve ny hanapa-kevitra farany?
Ity ambany ity ny lohahevitra niadian-kevitra tao amin'ny habaka Ppmpu:
Tena mety hohararaotina ity fitsipika ity. Eny, ny tiako lazaina dia hanararaotra izany izy ireo, ary mino aho fa volavolan-dalàna vendrana tokoa izy ity […] Mety ho tsara raha miasa tokoa araka ny tokony ho izy [izay no lazain-dry zareo], saingy raha ny zava-misy, hiezaka hamafa ireo fanehoan-kevitra avy hatrany ireo habaka raha hitany fa mahasosotra izany […] Ankehitriny, handeha ho eny amin'ireo habaka tsy maika hamafa fanehoan-kevitra ny olona.
Ity kosa adihevitra tao amin'ny tontolon'ny Twitter Koreana tatsimo.:
@Chocolete90: Mihevitra tokoa ve izy ireo fa azo ampiharina izany fitsipika izany izay tamin'ny taona 70 sy 80 ihany no nety? Mihevitra tokoa ve izy ireo fa azo ametrahana lalàna ny aterineto? […] Fanapahan-kevitra diso andro.
@ehanb: Ny olana dia mazava tsara tsy azo lavina fa havelan'izy ireo ny fanehoan-kevitra metimety aminy.
@skjn_legon: Ho an'ireo manampahefana, toerana tsy fantatra, maizina sy mampatahotra ny aterineto. Ka tian'izy ireo hanjakàna raha mbola eo amin'ny fahefana izy ireo.